Amaqhinga ama-3 okwenza indlu inuke kamnandi | Bezzia
Amaqhinga ama-3 okwenza indlu inuke kamnandi
UToñy Torres | 11/09/2021 16:00 | Ikhaya
Iphunga elihle ekhaya libalulekile ekujabuleleni imvelo yasekhaya ehlanzekile neyamukelekayo. Ukufeza lokhu, kuyadingeka ukugcina inhlanzeko nokuhlanzeka okuhle egumbini ngalinye lekhaya lakho. Kepha ukuhlanza nje akwanele, ngoba kwesinye isikhathi abanye bayazibophezela amaphutha angavumeli ukuthi indlu ihlanzeke ngokuphelele. Ukuze uqiniseke ukuthi indlu inuka kamnandi njalo, ungalandela amaqhinga ambalwa.
Futhi akukona ukufihla iphunga elibi ngama-air fresheners noma amakha okufakelwa. Isihluthulelo siwukuhlanzeka, ukungena komoya nsuku zonke kwendlu nemininingwane evame ukunganakwa, ngendlela yokuhlanza. Uma ufuna ukwenza indlu inuke kamnandi, sizokutshela ezinye zazo ngokushesha amathiphu wokukufeza ngendlela elula, elula futhi eqinile.
1 Ukuthi indlu enuka kamnandi iqala ngokungenisa umoya okuhle
1.1 Izimpahla zokuhlanza indlu
1.2 Amaqhinga okuthola iphunga elihle ekhaya
Ukuthi indlu enuka kamnandi iqala ngokungenisa umoya okuhle
Ukuza ekhaya ngemuva kosuku olude, olunzima emsebenzini yilokho okudingekayo ukuze uthole ukuphumula okufanele. Kepha uma indlu ingahlanzekile, akukho phunga elimnandi noma kunenhlangano embi, kuba nzima kakhulu ukujabulela isimo senhlalakahle okufanele sinikezwe yikhaya. Ukungenisa umoya kahle kuyisihluthulelo sokwenza indlu inuke kamnandi futhi akudingekile ukuthi amawindi avulwe usuku lonke.
Ukuvula amafasitela imizuzu eyi-15 kuya kwengama-20 ekuseni kwanele. Avule umbhede ukhiphe amashidi ngaphambi kokwendlala umbhede. Thola okwamanje ukufeza ukungena komoya okuphambene, lokhu kuzosebenza kangcono kakhulu. Ngalesi senzo esilula sansuku zonke uzokwazi ukuqeda iphunga elibi emakamelweni.
Izimpahla zokuhlanza indlu
Akukho ukusetshenziswa kokuchitha amahora uhlanza uma ungachithi isikhathi uhlanza amathuluzi wokuhlanza. Amapads nezindwangu zasekhishini, imophu, umshanelo nanoma yiziphi izinto ezivame ukusetshenziselwa ukuhlanza. Konke la mathuluzi agcina imfucumfucu nezinsalela okuthi uma kungahlanzwaZiphinde zenze iphunga elibi, amabhaktheriya, isikhunta kanye nezilwanyana ezincane eziyingozi empilweni.
Ukugwema lokhu, kufanele hlanza zonke izinto zokuhlanza njalo, uma kungenzeka ngemuva kokusebenzisa ngakunye. Ngakho-ke lapho kufanele uphinde usebenzise lezo zinto ukuhlanza, uzoba nazo zisesimweni esifanele ukushiya indlu ihlanzekile futhi ingenalo iphunga elibi. I-mop engcolile, indwangu enezinsalela zokudla noma umshanelo onensalela evela phansi, kusetshenziselwa kuphela ukusabalalisa ukungcola. Gwema ukusebenza kabili nge-just gcina imikhiqizo yakho yokuhlanza ihlale ilungile.
Amaqhinga okuthola iphunga elihle ekhaya
Ngaphezu kokungenisa umoya nsuku zonke nokuhlanza, ungasebenzisa amaqhinga ambalwa ukugcina indlu yakho inuka kahle njalo. Yebo kunjalo, gwema amakhemikhali anephunga elingelona iqiniso ngoba uzokwazi ukufihla kuphela hhayi ukuqeda imbangela yephunga elibi. Esikhundleni salokho ungazama eyodwa yalezi zindlela:
Lungisa isitsha sokufafaza uhlanganise amanzi nesithambisi sendwangu. Nsuku zonke ngaphambi kokondla umbhede, fafaza amashidi ngale nhlanganisela ukuze umbhede uhlale unuka sengathi usanda kugezwa.
Izindwangu zamasaka ezinezimbali ezomile. ILavender iphelele yize ungasebenzisa futhi i-potpourri namaconsi ambalwa wephunga lakho olithandayo. Beka amasaka endwangu anephunga elimnandi ngaphakathi kwamakhabethe, phakathi kombhede ohlanzekile ngisho nasemakhoneni endlu yakho njengokungena endlini yakho.
I-Bicarbonate ezicutshini. Okhaphethi nezindwangu eziwugqinsi ezifana nalezo kusofa kunzima ukuwasha futhi zivame ukuqoqa ukungcola okuningi, okwenza iphunga elibi. Kanye ngesonto, fafaza i-baking soda eyomile kukhaphethi nakusofa. Ngakusasa ekuseni kufanele nje i-vacuum ne-bicarbonate kuzosusa iphunga elibi.
Zonke lezi zeluleko zizokusiza ugcine indlu ingenaphunga. Kepha ungasebenzisa futhi izixazululo ezihlobisa, njenge amakhandlela anamakha, izishisi zephunga noma izimbali ezomisiwe. Ngokuthinta okuncane uzothola ikhaya elamukeleka ngokwengeziwe lapho ungaphumula khona futhi ujabulele ithempeli lakho lokuthula.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Amaqhinga ama-3 okwenza indlu inuke kamnandi
Ungagwema kanjani amabhamuza ezinyaweni zakho lapho ugijima
IVitamin B3: Izinzuzo zayo, ukudla nokunye okuningi